စကားပြောနေသော … | Layma's World
« New address SHELTER »
သားကြွက်, on June 6, 2008 at 11:29 pm said:
အဟမ်း အဒေါ်ကြီးက အာခီ လား သမိုင်းသုတေသကပါလားခင်ဗျာ 😛 ဟားဟား တီကြွက်ရေးမှ သမိုင်းကြောင်းတွေသိပြီးး မင်းကြီးများ ဘုရား ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င်ဇတ်ကားတွေ ပြန်ပြန်သိရနေလို့။
ဘယ်ဦးနှောက်ဖြင့် ပြည်သူတို့အား အာလူးတွေပေး / လက်ဝဲလက်ဖြင့် လူအပေါင်းတို့အား ပစ္စည်း ဥစ္စာအလစ်သုတ်မည်ဟု ယခု အနော်တို့ဘ၀ရှင်မင်းတရားကီး မှ မိန့် ကြားတော်မူနေတယ်တဲ့ဗျ 🙂
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on June 7, 2008 at 5:57 pm said:
စာလာဖတ်တယ် မလေးမရေ . ..
အဲဒီလို မင်းကြီးများ မိုးပေါ်က ပြန်ကျလာမလားလို့။
ကောင်းမှုတွေ သိပ်များသွားတော့လည်း လူ့ပြည်ကို ရောက်မလာကြတော့ဘူး ထင်တယ်။
MhawSayar, on June 7, 2008 at 7:22 pm said:
အစ်မရေ. ဒီ စကားပြေလေး ဖတ်ရတာ. ဆရာ ချစ်ဦးညို ၀တ္ထုတွေ သွားသွား သတိရတယ်ဗျို့…. အစ်မသာ ၀တ္ထုရှည်ကြီးတွေ ရေးရင် အတော့်ကို ဖတ်ကောင်းမှာ သေချာတယ်ဗျ. 🙂
soemoe, on June 7, 2008 at 8:13 pm said:
ညိမ်းညို, on June 8, 2008 at 4:36 am said:
အမလေးမရေ ညာဘက်ထောင့်က the posts I like best စာရင်းထဲ ဒီပို့လေးပါရေးထားပါလားလို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေရင်းအမကြီးဆီလာလည်တာဗျ။ သိပ်ကောင်းတဲ့စာတပုဒ်ပဲဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ အမလေးမရေ 🙂 🙂
mtj, on June 8, 2008 at 2:16 pm said:
ကော့မန့်ပလပ်အင်လေး စမ်းကြည့်မယ် 🙂
THS, on June 8, 2008 at 3:47 pm said:
ကျောက်ထွင်းသမား နေရာကနေတင်ပြသွားတဲ့ စိတ်ကူးလေးကို သဘောကျမိတယ် ၊ အစ်မလေးမ ပြန်ရေးလေ့ရှိတဲ့ ရာဇ၀င်တွေက မှတ်မိလွယ်အောင် ပြောပြလိုက်သလိုပဲ ၊
အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ အစ်မလေးမ ။
highlight, on June 9, 2008 at 8:13 am said:
အင်း.. ဒီလိုဘုရင်မျိုးလိုချင်လိုက်တာ မလေးရေ..
heartmuseum, on June 9, 2008 at 10:50 pm said:
လွမ်းအောင်ပုံပြောနေပြန်ပြီ။ အခုတော့ ကျွန်တော် တကယ်လိုချင်ပြီ။
ဟန်သစ်ငြိမ်, on June 10, 2008 at 12:43 pm said:
ကောင်းတယ်။ ဗဟုသုတရတယ်။ အဲဒီလောက် မဟုတ်တောင် အဲလို ခပ်ဆင်ဆင်ဘုရင်မျိုးတွေ ရှိသင့်တာ…။
nhn, on June 10, 2008 at 12:45 pm said:
‘ဒီပို့ စ်လေးတော်တော်မိုက်တယ်ဗျို့မဂ္ဂဇင်းပို့ ဖို့ တောင်ကောင်းရဲ့ 
မွန်, on June 11, 2008 at 8:44 am said:
စုဖရားကတည်းက အမြဲစောင့်ဖတ်ခဲ့ရတာနော် မျက်လုံးထဲမှာ နန်းဝတ်နန်းစားတွေ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် နန်းဆောင်ခန်းမတွေနဲ့ ဘုန်းမီးနေလ တောက်ပမှုတွေ တရေးရေးမြင်လာရတယ် မမရဲ့စာက ဒီလိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာလေ
သိုးလေး, on June 11, 2008 at 6:58 pm said:
ကချေသည်လို ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးတွေ နောက်ပိုင်းကတည်းက မမလေးနဲ့ အပြန်အလှန်မပြောဖြစ်တာ ကြာပြီနော်။ ဒီတစ်ပုဒ်လည်း ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ မမလေးပြောင်းတဲ့လိပ်စာ မှတ်သွားတယ်နော်။
nu-san, on June 11, 2008 at 10:25 pm said:
လေးမရေ.. အိမ်အသစ်မှာ comment ရေးလိုက်ပြီ။ သမိုင်းအကြောင်းကိုအခြေခံပြီး ရေးပြထားတာ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ။
ဒီစာသားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အခုခေတ်နဲ့က ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေလို့.. 🙂
Minn, on June 12, 2008 at 1:47 pm said: